မိန်းမိန်းတို့လဲ ဆန္ဒပြည့်ဝစေဖို့ | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး မိန်းမိန်းတို့လဲ ဆန္ဒပြည့်ဝစေဖို့
အိမ်ထောင်သည်တွေ နဲ့ အတူနေချစ်သူရည်းစားတွေရဲ့ လိင်မှုဘဝ သာယာဖို့က နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝမှုအပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား?
လိင်ဆက်ဆံတာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီမှုလိုသလိုပဲ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လိင်မှုဘဝကို လိုချင်ရင်တော့ တစ်ယောက်တည်း သာယာနေလို့တော့ မရပါဘူး။
အိမ်ထောင်သည်တွေ နဲ့ အတူနေချစ်သူရည်းစားတွေမှာ လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝမှုနဲ့ ပက်သက်လာရင် အမျိုးသမီးတွေထက် အမျိုးသားတွေကပဲ အရင်ပြီးမြောက်ကြတာ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်အလိုကို တစ်ယောက်သိပြီး အထွတ်အထိပ်ကို တူတူ တက်လှမ်းနိုင်ဖို့ဆိုရင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကြိုးစားမှုပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိလိုရာမေးက အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ချစ်သူနဲ့ ချစ်ရည်လူးကြတဲ့အခါ ဆန္ဒပြည့်စေဖို့ လုပ်ရမယ့် အရာလေးတွေကို ပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်။
(၁) အနှောင့်အယှက်တွေကို မေ့ထားပါ…
ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး ကောင်းခန်းရောက်ရင် ဖုန်းမြည်လာတာ၊ တံခါးခေါက်သံ ကြားရတာ အစရှိသဖြင့် အနှောင့်အယှက်တွေကို ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ပတ်ဝန်းကျင်က အနှောင့်အယှက်တွေက ကြွနေတဲ့စိတ် ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိ ဖြစ်လောက်အောင်ကို စွမ်းအားကြီးပါတယ်။ ဒီတော့ မိန်းမိန်းတို့တွေ ချစ်ချစ်နဲ့ ဒချိတော့မယ်ဆိုရင်တော့ အနှောင့်အယှက်တွေဖြစ်တဲ့ ဖုန်းတွေကိုပိတ်၊ တံခါးလော့ခ်ချပြီး နောက်ဆုံး ကုန်ကုန်ပြောရမယ်ဆိုရင် လင်းထိန်နေတဲ့ ရှိရှိသမျှ မီးတွေကိုတောင် ပိတ်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
(၂) ကိုယ့်အကြိုက်ကို ဖွင့်ပြောပါ…
ထိုးသွင်းဆက်ဆံမှုပြုတဲ့အခါမှာ ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီး သာယာမှု ရစေဖို့ဆိုရင်တော့ ကနဦးနှိုးဆွမှုက မပါမဖြစ်ပါပဲ။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ရှက်တတ်တဲ့ စိတ်ကို ခဏဘေးဖယ်ထားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ဘယ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကို ထိတွေ့ရင် စိတ်ကြွတယ်၊ သဘောကျတယ်ဆိုတာကို ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ကို ဖွင့်ပြတိုင်ပင်တတ်ဖို့လဲ အရေးကြီးပါသေးတယ်။ ဒါမှ အတူနေတဲ့အခါမှာ လက်တွဲဖော်က ကိုယ့်အကြိုက်ပေါ်လိုက်ပြီး ကနဦးနှိုးဆွမှုကို ထိထိမိမိ လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ကိုယ့်ဘက်စလို့လဲ ရပါတယ်…
ချစ်ရည်လူးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ မိန်းမိန်းတို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်ရသူရဲ့ ဦးဆောင်မှု နောက်ကိုပဲ လိုက်နေရတာ ပျင်းဖို့ကောင်းလွန်းပါတယ်။ ဒီလို သမားရိုးကျနဲ့မတူ ကိုယ့်ဘက်ကစပြီး ဦးဆောင်မှုပြုလေ့ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက သာမာန်အမျိုးသမီးတွေထက် လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝဖို့ ရာခိုင်နှုန်းက ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း ပိုတယ်လို့ စစ်တမ်းတွေအရလဲ သိရပါတယ်။ ဒီတော့ တခါတလေမှာ ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ ကိုယ့်ဘက်က စမယ်ဆိုရင်ရော မကောင်းဘူးလား? ကိုယ့်ဘက်က First Move အနေနဲ့ လှုပ်ရှားတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ချစ်သူရဲ့ အင်္ကျီကို ချွတ်ပေးတာ၊ အမျိုးသားရဲ့ အပေါ်ကနေပြီး ကိုယ်က ဦးဆောင်လှုပ်ရှားပြီး ဆက်ဆံတာမျိုးတွေကို လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
(၄) ပုံစံအဆန်းလေးတွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ပါ…
အတူချစ်တဲ့အချိန်မှာ ဆန္ဒပြည့်ဝစေဖို့ဆိုရင်တော့ မိန်းမိန်းတို့အနေနဲ့ ချစ်ချစ်နဲ့ ပုံမှန်လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးသွားနေတာကနေ တမျိုးပြောင်းပြီး ဆန်းသစ်ဖို့ လိုနေပါပြီ။ ချစ်ကြတဲ့ ပုံစံတွေ အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာ မိန်းမိန်းတို့ အထွတ်အထိပ်ရောက်စေဖို့ အကူညီဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေကတော့ ဒေါ့ဂီလို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးက ခါးကုန်းထားပြီး အမျိုးသားက နောက်က ဆက်ဆံတဲ့ ပုံစံမျိုး၊ ယောကျာ်းအပေါ်ကနေပြီး မြင်းစီးသလိုမျိုး ဆက်ဆံတာ၊ ဘိုကြီး အမြှောက်ထမ်းလို့ခေါ်တဲ့ မတ်တပ်အနေအထားနဲ့ ယောကျာ်းက ပက်လက်အိပ်နေတဲ့ မိန်းမတင်ပါးကို ပင့်ပြီး ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုးအပြင် ရေချိုးခန်းထဲမှာ ဆက်ဆံတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
(၅) ပန်းဖူးလေးကို မမေ့ပါနဲ့…
အမျိုးသမီးအများစုမှာ လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝဖို့ဆိုတာက တခါတလေမှာ ထိုးသွင်းဆက်ဆံတာ တစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သုတေသနပြုလုပ်သူတွေရဲ့ အဆိုအရ အမျိုးသမီးတွေကို လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာ တခြားသော ကနဦးနှိုးဆွမှုတွေနဲ့အတူ မိန်းမကိုယ်လိင်အင်္ဂါအစေ့ကို လှုံ့ဆော်ပေးတာက အထွတ်အထိတ်ကို ရောက်စေဖို့ အထောက်အကူပြုတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီတော့ မိန်းမိန်းတို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ကျားကျားကို လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝစေဖို့ ပန်းဖူးလေးကို လှုံ့ဆော်ပေးဖို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုင်ပင်တာမျိုး ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကွန်ဒုံးလို သုံးပြီး အတူနေတဲ့ စုံတွဲတွေဆိုရင်တော့ လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝဖို့ကို တဖက်တလမ်းက လှုံ့ဆော်ပေးမယ့် နှစ်ဆပိုကြီးတဲ့ အဖုတွေပါတဲ့ Mojo Ultra Dotted ကွန်ဒုံးမျိုးကို ချစ်ချစ်ကို သုံးခိုင်းလို့လဲ ရပါတယ်။